Farmaajo oo fikirkiisa ka dhiibtey difaacii dawladii qaranku ugu jirtey isku haynta dalka - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Farmaajo oo fikirkiisa ka dhiibtey difaacii dawladii qaranku ugu jirtey isku haynta dalka
Kadib maalin kahor oo madaxweynuhu kulan uu soo qaban qaabiyay raiisal wasaaraha Itoobiya uu la qaatey horjoogaha maamulka Somalilaan, ayaa uu ka dhiibtey fikirkiisa duulaankii dawladii kacaanku ugu jirtey isku haynta dalka iyo gudashada waajibkeeda.
“Wixii ka dhacay Hargeysa iyo Burco waxay ku dhaceen nidaam dawladeed mana ahayn marnaba mid loo qaaday qabiil ku duulaya qabiil kale ama Koofur iyo Woqooyi, waxaan jeclahay inaad taas Ila qaadataan ayuu yiri Farmaajo.
Xagjirka SNM oo xasuuqay boqolaal dadkooda ah iyo qabiilada jaarkaba waa hadalada ay ugu jecelyihiin, waxaanad maqli doontaan, ayagoo oran doona bal eega waakaase, ayagoo uu daboolaya xaauuqyada faraha badan ee ay gaysteen, mudadii u dhaxaysay 1992 iyo 1995 iyo 2004 Kalshaale ayuu yiri Xuseen Warsame oo Hargeysa jooga.
Talaabada ay qaaday dawladii kacaanku waa mid ay qaadi lahayd dawlad kasta oo masuula oo iyadu ka masuula amniga dadkeeda iyo ilaalinta sharciga marka jufo isku daydo in ay sharciga gacanteeda ku qaadato ayuu raaciyay Xuseen Warsame.
Waxaan ogaa Ingiriiska oo ku hanjabaya inuu askarta u dalban doono bililiqo iyo dukaamo dab la qabadsiiyay Koofurta London, waana kuwa ugu munaafaqsan ee ka hadla waxa dawladaha kale ee la midka ah sameeyaan.
Si kastaba ha ahaatee Farmaajo maaha inuu wax ka sheego ficiladii dawladii hore waayo waxa ka weyn wixii dhacay dabadii oo ah in dalkii la geeyay halkii lala rabay.
Somalidu waxay u baahan yahay inay dibu furato baal cusub oo looga gudbayo xumaantii hore, taasina ma dhacayso inta la iaticmaalayo nidaamka gaalada ee federaal, gobolada qaarna ay u taliyaan kuwii xasuuqa qayb ka ahaa waayo waxay dabada ku hayaan gaalo iyo cadowga dalka.
Wuxuu Farmaajo ka gaabsadey inuu ka dalbado horjoogeyaasha nool ee xasuuqay barakiciyayna boqolaalka qof ee magaalooyinka Hargeysa, Burco, Boorama, Dilka iyo Kalshaale inay cafis weydiistaan dadkaas ay noloshooda seejiyeen.